MMEZI AGBA NA PHOTOSHOP - PHOTOSHOP - 2019
Mmezi agba na Photoshop
M3D bụ usoro a na-eji na ngwa ndị na-arụ ọrụ na ụdị 3D. Ọ na-arụ ọrụ dị ka faịlụ nke 3D ihe na egwuregwu kọmputa, dịka ọmụmaatụ, Rockstar Games Grand Theft Auto, EverQuest.
Ọzọ, anyị na-elebakwu anya na ngwanrọ nke meghere ndọtị a.
Usoro 1: KOMPAS-3D
KOMPAS-3D bụ usoro a maara nke ọma na usoro nhazi. M3D bụ usoro ya.
Malite ngwa ma pịa otu n'otu "Njikwa" - "Meghee".
Na mpio na-esote, gaa na nchekwa ahụ na faịlụ isi, họrọ ya wee pịa bọtịnụ "Meghee". Na mpaghara ebe ị ga-ahụ ihu, ị ga-ahụkwa ọdịdị nke akụkụ ahụ, nke ga-aba uru mgbe ị na-arụ ọrụ na ọnụ ọgụgụ dị ukwuu nke ihe.
Ihe ngosi 3D gosiri na windo arụ ọrụ nke interface ahụ.
Usoro 2: DIALLES EVO
DIALux EVO bụ usoro maka ịkọ ọkụ. Ị nwere ike ibubata faịlụ M3D n'ime ya, ọ bụ ezie na akwadoghi ya.
Download DIALux EVO site na ebe nrụọrụ weebụ gọọmentị.
Mepee DIALUX EVO ma jiri òké mee ka isi ihe ahụ si na ndekọ Windows gaa n'ọhịa ọrụ.
Usoro ntinye faịlụ ahụ na-ewere ọnọdụ, mgbe nke ahụ ga-egosi ụdị atụmatụ atọ na mpaghara ọrụ.
Usoro 3: Aurora 3D Text & Logo Maker
Aurora 3D Text & Logo Onye kere eji edepụta ederede atọ na logos. Dị ka ọ dị na KOMPAS, M3D bụ usoro ya.
Download Aurora 3D Text & Logo Onye kere site na website ọrụ.
Mgbe ịmalitere ngwa ahụ, pịa ihe ahụ "Meghee"nke dị na menu "Njikwa".
N'ihi ya, windo nhọrọ ga-emeghe, ebe anyị na-aga na ndekọ achọrọ, ma họrọ faịlụ ma pịa "Meghee".
Ihe odide 3D "Ihe osise", nke a jiri mee ihe dị ka ihe atụ, na-egosipụta na windo.
N'ihi ya, anyị chọpụtara na enweghi ọtụtụ ngwa na-akwado usoro M3D. Nke a bụ akụkụ ụfọdụ n'ihi n'eziokwu na faịlụ nke egwuregwu 3D maka PC na-echekwa n'okpuru ndọtị a. Dị ka a na-achị, ha na-esite n'ime ya ma enweghị ike ịmeghe site na ngwanrọ nke atọ. O kwesịkwara icheta na DIALux EVO nwere ikikere n'efu, ebe a na-enweta nsụgharị ikpe maka KOMPAS-3D na Aurora 3D Text & Logo Maker.